न्युयोर्क, असार । गुगल तथा अन्य ६ कम्पनिले अमेरिका र जापानलाई केवलको माध्यमबाट जोड्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । पानी भित्र केवल जडान गरिएको उक्त ट्रान्स प्यासेफिक तार करिब ३०० मिलियन डलरको लागतमा निर्माण गरिएको हो। यसले अमेरिकाको ओरेगनलाई जापानको चिबा र मेइसँग जोडेको छ। जसकालागि ९ हजार किलोमिटर तारको प्रयोग गरिएको छ। प्रतिसेकेण्ड ६० […]
महत्वपूर्ण अवसरलाई अविस्मरणीय बनाउने चाहना सबैको हुन्छ । सोही कारण कुनै पनि समारोह, घुमघाम, पिकनिकजस्ता कार्यक्रममा धेरैको ध्याउन्न फोटो खिच्नेमा नै हुन्छ । आजकल मोबाइल सेटमा नै जडान हुने क्यामेराले सबैलाई फोटोग्राफर पनि बनाइदिएको छ । अझ सेल्फी कल्चरले त छुट्टै फोटोग्राफरको आवश्यकता पनि नहुने भइसकेको छ । तर, हातमा क्यामेरा हुादैमा सबैले राम्रै तस्बिर […]
क्यामराको विकल्प स्मार्ट फोन
काठमाडौं , १३ असार । फोटो खिच्न सौखिनले क्यामराको सट्टा महँगो फोन र सेल्फी स्टिक बोक्न थालेपछि क्यामराको बजार ओरालो लाग्दै गएको छ। साना डिजिटल क्यामराको उत्पादनै धमाधम बन्द हु“दैछ भने व्यावसायिक फोटोग्राफरले प्रयोग गर्ने डीएसएलआरको उत्पादन पनि घट्दो क्रममा छ। सन् २००९ पछि डिजिटल क्यामराको अन्तर्राष्ट्रिय बजार ८० प्रतिशतले घटेको छ। स्थानीय बजारमा पनि […]
१५ सय मानिस अटाउन सक्ने प्लेन
काठमाण्डौ । विश्वको उड्डयन उद्योगमा तीव्र गतिमा परिवर्तनहरु आइरहेका छन् । एयरक्राफ्ट बनाउने कम्पनीहरु भविष्यको जरुरतलाई मध्यनजर गर्दै जहाजको डिजाइन, विशेषता, सुन्दरतामा कैयन परिमार्जन गरिरहेका छन् । आज हामी उड्डयन उद्योगको तीव्र परिवर्तनशील विश्वमा यस्तो एयरक्राफ्टको बिषयमा बताइरहेका छौं, जसलाई कार्गोको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो बिमानको संज्ञा दिइएको छ । एन्टोनोव एन २२५ मरिया विश्वकै सबैभन्दा […]
आयो आगो नियन्त्रण गर्ने बाइक
काठमाडौं, ९ असार । नेपालमा आगलागी भएपछि नियन्त्रण गर्ने मोटरसाईकल भित्रिएका छन् । फायर बाइक अर्थात् आगो निभाउने मोटरसाइकल बारुण यन्त्र छिर्न नसक्ने साँघुरा स्थानहरूका लागि पनि उपयोगी रहेको छ । विदेशमा प्रचलित यो बाइक नेपालमा पनि भित्रिएको छ । आगलागी नियन्त्रणका उपकरण तथा यन्त्रहरू जडान गरिएका यस्ता बाइकमा ड्राइ केमिकल पाउडर आदि रसायन पनि […]
मोवाईलबाट डिलेट भएको फोटो कसरी रिकभर गर्ने त ?
काठमाडौं,७ असार । तपाईको मोवाईबाट तपाईलाई चाहिने फोटाहरु डिलेट भएमा कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने विषयलाई लिएर चिन्तीत हुनुहुन्छ ? चिन्ता नलिनुहोस डिलीट भएको फोटाहरु सजिलै रिकभर गर्न सकिन्छ । फोटो फिर्ता ल्याउनुभन्दा अघि यदि मेमोरी कार्ड वा फोन फर्म्याट गरिएको भए चाँहि फोटो फिर्ता ल्याउन सम्भव छैन। फोटो फिर्ता ल्याउनको लागि रिकभरी सफ्टवेयरको जरुरत पर्छ। […]
अन्तरिक्षमा बसेर ६ महिनापछि पृथ्वी फिर्ता
काठमाडौं, ६ असार / बेलायती अन्तरिक्षयात्री टिम पीके अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा ऐतिहासिक ६ महिने बसाइपछि पृथ्वी फिरेका छन् । मेजर पीके र अन्य दुई यात्री बोकेको सोयुज क्याप्सुल शनिबार स्थानीय समय सवा १० बजे कजाकस्तानमा अवतरित भएको हो । पीकेले पृथ्वी फिर्दाको यात्रालाई जीवनकै सबैभन्दा राम्रो भनेका छन् । ‘पृथ्वीको गन्ध साह्रै तिख्खर छ,’ उनले […]
गुगलका नयाँ प्रबिधी
गुगलले प्रत्येक वर्ष गर्ने गुगल आईरओ यो वर्ष पनि सम्पन्न भएको छ । यो सफ्टवेयरमा आधारित एक प्रकारको कन्फ्रेन्स हो । गुगलले बजारमा ल्याउने योजना बनाएका विभिन्न सफ्टवेयर वा त्यस्तै प्रकारका गुगलका उत्पादनसम्बन्धी जानकारी यसमा प्रदान गरिन्छ । यो वर्ष पनि गुगलले आफूले बजारमा ल्याउने योजना बनाएका विभिन्न उत्पादनका बारेमा जानकारी दिएको छ । सन् […]
यूट्युबको भिडियो कसरी डाउनलोड गर्ने ?
यूट्युबको भिडियो सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सबैभन्दा पहिले डाउनलोड गर्नुपर्ने भिडियोलाई क्लिक गर्नुपर्छ । डाउनलोड गर्नुपर्ने भिडियोको युआरएल लिंकको एचटिटिपीएसदेखि डब्लुडब्लुडब्लुडटसम्मलाई हटाएर त्यसको ठाउँमा दुईपटक एस (ss) टाइप गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि https://www. को ठाउँमा ss टाइप गर्नुपर्छ, त्यसपछि सीधै डाउनलोड गर्न मिल्ने अर्को साइट खुल्छ जहाँबाट सजिलै सिंगल क्लिकमा भिडियो डाउनलोड गर्न सकिन्छ । […]
आवाजबाट ‘लक’ गर्ने स्मार्टफोन
एजेन्सी , तपाईं आफ्नो स्मार्टफोन आफ्नै आवाजबाट ‘लक’ गर्न चाहनुहुन्छ ? यदी चाहनुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नै आवाजबाट फोन लक गरेर ‘प्याटन’ राखेर झन्झटिलो प्रक्रियाबाट लक अनलक गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो समस्या समाधान हुनेछ । त्यसका लागि तपाईंले एउटा एप तपाईंको मोवाइलमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि एकमिनेट भन्दा कम समयमा तपाईंले आफ्नो आवाजबाटै फोन लक […]